RASMI: Dalka lagu ciyaari doono Copa America 2021 oo la shaaciyey kaddib markii marti-gelintiisa laga wareejiyey Argentina & Colombia – Gool FM
(America) 31 Maajo 2021. Xiriirka kubadda cagta Koonfurta Ameerika ee Magaciisa loo soo gaabiyo CONMEBOL ayaa xaqiijiyey dalka lagu ciyaari doono tartanka Copa America ee 2021, kaddib markii ay marti gelinta tartankaasi ka qaadeen dalalka Argentina iyo Colombia.
Dalka Brazil ayaa la shaaciyey lagu ciyaari doono Copa America 2021, waxaana xiriirka CONMEBOL ay xaqiijiyeen in dalka Brazil oo ah dalka difaacanaya Koobkan uu marti gelin doono sanadkan.
Tartankan goorta uu bilaabanayo iyo taariikhda uu dhammaanayo hore ayaa loo xaqiijiyey, waxaana xiriirka Koonfurta Ameerika ay saacadaha yar ee nagu soo aaddan ay xaqiijin doonaan qaabka ay xulalku u kala ciyaari doonaan iyo qaabka uu isku aadku noqonayo.
Waddamada Argentina iyo Colombia ayaa la filayay inay si wadajir ah u martigelin doonaan tartankan, waxaana ay noqon lahayd markii ugu horreysay ee ay labo dal wada martigeliyaan koobkan 105 sano ee uu jiro.
Waxa ay xiriirku Koonfurta Ameerika go’aan ku gaareen 20-kii May in dalka Colombia ay ka wareejiyaan masuuliyadda marti-gelinta tartankan, maadaama ay mudaaharaado ka socdeen dalkaasi, halka Waddanka Argentina isna maanta uga weeciyeen marti-gelinta tartankan sababo la xiriira caabuqa Korona Fayras oo dalkaasi kiisaskiisu ay ku sii kordhayaan.